Ball Valve tsy misy fangarony
Steel Valve Valve Ball
Fanoherana ny tontolon'ny vy tsy misy fatrany amin'ny tsiranoka
Ny valin'ny famehezana ny baolina vy tsy misy fangarony dia manana valizy vavahady mifanila, ary ny tampon'ny vatan'ny valizy dia nasiana peroxydalisé, noho izany dia misy fanoherana tsara harafesina ary mahatohitra ihany koa. Ny valizy vavahady vy tsy metimety dia afaka misafidy fantsona maro samihafa, mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny tsy ...
Ny hamafin'ny haavo sy ny fanoherana ny baolina famehezana mafy
Ny baolina famehezana mafy dia ny andiam-panokafana sy ny famaranana ny valin'ny valin'ny GM, miaraka amin'ny mari-pana avo lenta, fanerena avo ary valves-bolo tsy mahazaka. -Cr-W C sy ny firafitry ny surfacing W dia manana ny hamafiny ambany indrindra ary iray amin'ireo tsara indrindra. Izy io dia mahatohitra fikorontanana mangatsiaka sy mafana, ...
Ahoana ny fomba hiantohana ny fanamafisana ny valizy vy tsy miovaova
Mba hahazoana antoka ny fahombiazan'ny famehezana ny valizy vy tsy misy fangarony rehefa ambany ny tsindry miasa eo anelanelan'ny baolina sy ny seza famehezana. Ao amin'ny sealing famehezana mafy, ny fahamendrehana sy ny ain'ny serivisy amin'ny baolina vy tsy miova v ...
Inona ny fanantenana amin'ny fampandrosoana valizy vy vy
Misy karazany maro ny valves baolina vy tsy misy vy. Ny karazana valves baolina vy tsy misy fangarony dia samy manana ny asany sy ny fomba fampiasana azy. Amin'izao fotoana izao, ny fandrosoan'ny zanak'olombelona dia tsy azo sarahina amin'ny fivoaran'ny siansa sy ny teknolojia, ary miaraka koa io dia mitondra ny fanatsarana hatrany ...